Igumbi lokujonga echibini elisondeleyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRoberta
Indlu esondeleleneyo ye-45 Sq m yabantu aba-2, enegumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa.
Ifakwe kumgangatho woku-1, inokufikelela ngokuzimeleyo, iyonwabela imbonakalo yechibi elimangalisayo ukusuka kwigumbi lokuhlala.
Indawo yokupaka egciniweyo.
Ukufikelela kwindawo ekwabelwana ngayo (amagumbi ama-5) echibini elingenasiphelo elijonge ihlathi.
Kubantu abathanda ukuzola kweenduli eziluhlaza, iikhilomitha ezi-6 nje ukusuka kwiGulf of Salò, kwindawo yepanoramic iphakama iCornice Sul Garda. Amafulethi amahlanu adalwe ukwenza uzive usekhaya, ejikelezwe buhlaza, ukonwabela eyona mbono intle kwaye iphumle yeLake Garda.
Sagqiba ekubeni sidibanise ubunewunewu kunye nokulula, ukuxuba iteknoloji yanamhlanje kunye nencasa yomhlaba kunye nemithi yentlambo apho sakhulela khona.
ICornice sul Garda ikwimizuzu emi-5 ukusuka eSalò kwaye ijikelezwe ziinduli eziqengqelekayo kunye namathafa endalo emithi kunye nemithi yomnquma apho unokonwabela umbono omangalisayo wechibi.
Imozulu yeMeditera, imbonakalo yomhlaba, uhlaza, incasa kunye namavumba asekuhlaleni echibi yimvelaphi.
I-Garda Lake yindawo ekhethekileyo yokuya kuyo eye yaphefumlela iimbongi ezinkulu kwaye yenza ukuba ifunyanwe kummangaliso wayo yonke into.
Kwimizuzu emithathu ngemoto kukho iivenkile ezinkulu, iibhanki, ikhemesti, imivalo kunye neendawo zokutyela.
Ukusuka eCastello, ezinye zeendlela ezintle kakhulu kwindawo yaseGarda yokuhamba ngebhayisekile yeentaba kunye nokuhamba. Kwiikhilomitha ezimbalwa kukho iinkundla zegalufa nezentenetya, izitali zokukhwela, iipaki zamanzi kunye neendawo ezininzi ezinomdla.
Ndinika iindwendwe zam indawo kodwa ndihlala ndinabo ngolwazi ngendawo yokuhlala kodwa nendawo, iindawo zokutyela, uhambo,…
Inombolo yomthetho: M02999/017201-CIM-00006